တင် ပါး ခွက်ကိုက် Sciatica ရောဂါခါးနာ၊ ပေါင်တန်းပြီး အကြောညပ်နေသလား ?? – XB Media Myanmar
တင် ပါး ခွက်ကိုက် Sciatica ရောဂါခါးနာ၊ ပေါင်တန်းပြီး အကြောညပ်နေသလား .. ဒီ Post လေးကို ဖတ်လိုက်ပါ
အ ဆိုး ဝါး ဆုံးရောဂါပါ… အခံရအခက်ဆုံး ရောဂါပါလို့ကျနော်ပြောလျှင် ယုံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ.. ကိုယ်တိုင်မှ မခံစားဖူးတာကိုး။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်၌ ခါးကြီးစေါင်းငန်းစေါင်းငန်းနဲ့ သွားနေသူတွေ။ တင်ပါး ခွက်ကလေးကို ဖိကာပွတ်ကာ သွားလာနေတဲ့သူတွေ။ ပေါင်ကိုက်ဒူးကိုက် ခြေသလုံးတလျှောက် ထုံကျင်နေတဲ့သူတွေ တွေ့ရင် အင်တာဗျူးကြည့်ပါ။ လေသံတခုတည်း ထွက်တာ တွေ့ရပါလိမ့်မည် (ရောဂါ အတော်စုံအောင် ဖြစ်ဖူးပါတယ်ဗျာ… ဒီတခါ အခံရခက်ဆုံးပဲ)လို့ ဖြေကြပါလိမ့်မည်။
ဒီေ ရာ ဂါအကွောငျးကို ကနြောျ့ဆရာသမား (Fighter အရာရှိကွီး) တယောကျ အိပျယာပေါ ျက မထနိုငျပဲ ကိုကျခဲလှနျးလို့ မကြျရညျတှတှေကေပြွီး အံကွိတျခံနရေတာ မကွညျ့ရကျလို့ ကနြောျထဲထဲဝငျဝငျ လေ့လာဖူးသညျ။ သူ့အခွအေနကေ မတျတပျပငျမရပျနိုငျရှာတော့။ လူကခါးတစေါငျးကွီး ဖွဈနပွေီ။ တပျမတောျကပငျ ထှကျရတော့မညျ့ အနအေထားပါ။ ကနြောျနဲ့သိကြှမျးသော အရိုးအကွောပါရဂူတှေ … Rehabilitation ပါရဂူတှေ…… Phisiotheraphist တှေ…… စုံနပေါဘီ။
M R I ရိုက်ဓါတ်မှန်ရိုက်… လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်… အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး မျိုးစုံသောက်… ဓါတ်ကင်Vibratorနဲ့နှိပ်…… မထူးခြားတော့ ဗမာဆရာတွေအကြော ပညာရှင်တွေ…… အနှိပ်ပညာရှင်တွေ …… အို- မြန်မာပြည်တနံတလျား စုံသလောက်နီးပါးဆိုပါတော့ ကုန်လိုက်တဲ့ငွေ…… သွားလိုက်ရတဲ့ခရီး…… အချိန်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တနှစ်ပြည့်တော့မည်။ မသက်သာသည့်အပြင် ပို၍ပို၍ ဆိုးလာပါသည်…… ခြေထောက်ပါထုံကျင်လာပြီး ညာခြေထောက်က အာရုံခံစားမှုမရှိတော့။
တင် ပါးခွက်ထဲကမချိမဆန့် ကိုက်ခဲသည့်ဒဏ်ကို အရင်ကလို အံကျိတ်မခံနိုင်တော့သဖြင့် အော်ဟစ်၍ခံစားနေရရှာသည်။
ကျေ နာ်လည်း လက်လှမ်းမှီရာဆေးပညာစာစောင်တွေ။ အာယုဗ္ဗေဒတွေ စုံစီနဖာဖတ်သည်။ ခါးခွဲလျှင်ပျောက်နိုင်သည်။ ပြန်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မည်။ အကြမ်းဖျဉ်းပြောရလျှင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အကြီးဆုံးအာရုံကြောမကြီး Sciatic Nerve ဟာ ခါးရိုး L4,L5 နေရာကစထွက်ပြီး ဘယ်ညာဖြာကာ တင်ပါးခွက်မှတဆင့်ခြေထောက်တလျှောက်ကို Supply လုပ်ပါတယ်။ ခါးရိုးကျဉ်းသူ, ခါးဆစ်မှာ အတက(်ကျီးပေါင်း)ထွက်သူ။ ခါးရိုးတီဘီရှိသူ ။ ခါးဆစ်တခုနှင့်တခုကြားက Disc အပြားလေးများ ကျွံထွက်သူ တို့မှာ ထိုအာရုံကြောကိုဖိမိထိမိသဖြင့် မခံစားနိုင်လောက်အောင် Lကွေးနေရာဖြစ်သော တင်ပါးခွက်မှာ သွားကိုက်ခဲတာပါ။ သေသေချာချာသိထားရမှာတခုက ဖြစ်တာကခါးပါနော်။ ခံစားရတာကတင်ပါးခွက်ပါနော်။
ဆရာဝန်တွေက ဘယ်ဘက်ဖြစ်ရင် Sciatica Left ညာဖက်ဖြစ်ရင် Sciatica Right လို့ခေါ ်ဆိုကြပါတယ်။ တချို့သဘောတရား နားမလည်တဲ့ အနှိပ်ဆရာတွေက လူနာတင်ပါးခွက်ကိုက်တယ်ပြောလေ တင်ပါးခွက်ကိုစွတ်နှိပ်လေ…… ကိုက်နေတဲ့အာရုံကြောကိုနှိပ်တော့ လူနာကလည်းသက်သာသယောင်ယောင်ပေါ့။ ခဏနေယင်တော့ အကြောတွေကယောင်ကိုင်းထလာပြီး အော်ရဘီ ငိုရဘီ ပေါ့ ။ ဒါကြောင့်နားမလည်တဲ့လူနဲ့ မပြမိပါစေနဲ့။
ဒီရောဂါ ဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲမေးရင် အခန့်မသင့်လို့ပဲလို့ ဖြေရလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ ။ ယေဘူယျအားဖြင့်အဝလွန်သူ- အထိုင်များသူ – ဆီးချိုရှိသူ – ခါးအလုပ်များသူ လို့အရင်က ဆို ခဲ့ကြပေမယ့်သုတေသနစစ်တမ်းအရအမေရိကန်မှာ အသက်၄၀ ကျော်ယင်ကျား ၈၄ /ံ့ မ ၇၄ /ံ့ ဖြစ်ပါသတဲ့။ တနည်းပြောရယင်လူတိုင်းနီးပါးဟာ တချိန်ချိန်မှ ာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
Cauda Equina Sydrome လို့ခေါ ်တဲ့ အာရုံကြောမျှင်တွေ ဖိနှိပ်ထိခိုက်ခံရတဲ့အခါနာတာရှည်ဖြစ်သွားပြီး ဆီးဝမ်းမထိမ်းနိုင် အောက်ပိုင်းသေ ကြာလာရင်အကြောသေ လေဖြတ်တဲ့အထိမို့ ပေါ့လို့ရတဲ့ရောဂါမဟုတ်ပါဖူး။ ကျနော့်ဆရာသမားဖြစ်သွားတာကတော့ ပြောရယင် ခါးနာပြီး Position Disorder ဖြစ်သွားတာပါ။ တနေ့မှာ ပြည်ကနေရန်ကုန်ကို စစ်သုံးမာဇဒါE2000 ပိကပ်ကားလေးနဲ့ ခရီးသွားပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ကားထွက်ကာနီးမှ အရာရှိကတော်တယောက်က သူ့မိခင်အသည်းအသန်ဖြစ်လို့ဆိုပြီး အကြုံလိုက် ပါတယ်။ ကားခေါင်းကကျဉ်းပါတယ်။ သူက အားနာတတ်သူ ညှာတာတတ်သူမို့ ခေါင်းခန်းထဲကို ခေါ ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
ခြောက်နာရီလောက် ခရီးရှည်ကြီးမှာ ကျနော့်ဆရာက အလယ်ကကြပ်ကြပ်သပ်သပ်လိုက်ရင်း ထိုအရာရှိကတော်နဲ့ ထိမိမှာစိုးလို့ မိန်းမသါးမို့ အားနာရင်း ကိုယ်ကိုကျုံ့သည်ထက်ကျုံ့ကာ ဟန်ချက်မညီPosition မမှန်ပဲလိုက်လာခဲ့ပါသတဲ့။ ခရီးဆုံးတော့ခါးတွေကပူပြီးညောင်းကိုက်နေပါသတဲ့။ နောက်နေ့ကျတော့ခါးနာပါသတဲ့။ ၃ ရက်လောက်နေတော့ ဒီရောဂါရခဲ့တာပါပဲ။ ခါးဆစ်ရိုးတခုနဲ့တခုအကြားက ကြားခံinter – vertebral Disc. ကျွံထွက်သွားတာပါ။
ဒီရောဂါဖြစ်သူဘယ်လောက်များသလဲ ? မြန်မာ ထိုင်း စင်္ကာပူ မလေးရှား သွားကုသူတွေရဲ့အခြေအနေ? သောက်ရတဲ့ဆေးတွေ?ခံစားရတဲ့ အခြေအနေတွေသိချင်သပ ဆိုရင်Face Bookမှာ “ခါးနာခြင်း Back Pain Group “လို့ရှာကြည့်ပါ။ ကျနော်အပိုမပြောကြောင်း သင်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ် ကျနော့်ဆရာသမားဟာ အရိုးအထူးကု ဂုရုကြီးလို့ခေါ ်ကြတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံက Professor Alain Patel နဲ့တောင် ကုခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခြေအနေက မတိုးတက်ပါဖူး။
အော်မြဲအော် ကိုက်မြဲကိုက်လျက် FBမှာ ပလူပျံအောင်share နေကြသည့် ရေထဲဆင်း ထန်းလျက်ဘယ်နှစ်ခဲစား တို့။ အာလူးပါးပါးကပ် တာ တို့။ ဘဲဥပြုတ်စားတာ တို့ ။ သက်ရင်းကြီးမိဿလင် စည်းတာ တို့ စုံစီနဖာလုပ်သော်လည်း အော်မြဲအော် ကိုက်မြဲကိုက်လျှက်။ အကိုက် အခဲပျောက်ဆေးတွေ လူးရတဲ့ဆေးပူ ဆေးအေးတွေလည်း စုံလှဘီ။ ရန်ကုန်မြို့မှာ အသစ်စက်စက်ဖွင့်တဲ့ ဆေးရုံကြီးကပါရဂူ တယောက်က မခွဲချင်ဖူးဆိုတော့လည်း Operation ခန်းထဲထည့်။ သေချာTV Screen နဲ့ကြည့်ပြီးခါးထဲကို Steroid ဆေးထိုးထည့်ပေးပါတယ်။ OK သွားပါတယ်။But သို့သော်လည်း ၃ ရက်မြောက်မှာပြန်ဖြစ်ပြန်ပြီ။
အခုရေးချင်တဲ့နေရာရောက်ပါပြီ။ ကျနော်လည်းဆရာသမားအတွက် စိတ်မကောင်းပါ။ ဘေးကကြည့်ပြီးဘာမှလည်းမကူညီနိုင်။ သူလည်းဆေးထောက်ခံစာနဲ့ ထွက်ခွင့် တင်လိုက်ပါပြီ။ တနေ့မှာ ပြည်မြို့ မင်းကြီးတောင်ပေါ ်ကဘုန်းကြီးကျောင်းကို ကျနော်မုန့်သွားလှူရင်း စာဖတ်ခန်းထဲက (အထင်မသေးနဲ့မြန်မာ့ဆေး) ဆိုတဲ့ဆရာသိန်း ပြုစုသည်………… တန်ဖိုး ၅ ကျပ်……… စာအုပ်လေးဖတ်မိပါတယ်။
အဲဒီမှာ………တင်ပါးခွက်ကိုက်သော် မခက်လော…… အိုးမှုတ်ခွက်နင်းသော်မပျောက်လော…… ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေး ဖတ်မိပါတယ်။ အားရဝမ်းသာ ကျနော်ဖတ်ကြည့်ပြီးချက်ချင်းပဲ Photostat မိတ္တူကူးပါတယ်။ ကျနော့်ဆရာသမားကို ပြေးပြပါတယ်။ ဆရာသမားက အနာကိုက်ခဲနေတဲ့ကြားက မချိပြုံးပြုံးယင်း (မင်းကွာ… ငါဆေးကုတာ တပြည်လုံးနှံ့ရုံမက ပြင်သစ်ကပါရဂူနဲ့တောင် မပျောက်ထာ) လို့ပြောရှာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်လက်မလျှော့ပါ။
သူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့အတူတူ စာအုပ်ပါလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ဖြစ်အောင် အတင်းတွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်။ ပထမတရက် မထူးခြား။ ဒုတိယတရက် ခါတိုင်းထက်နည်းနည်း သက်သာလာသည်။ တတိယရက် ကျတော့ ကေါင်းကေါင်း အိပ်လို့ရပါပြီ။ တနှစ်တိတိခံစားရတဲ့ရောဂါ ၅ ရက်မြောက်တော့ အရှင်းပျောက်။ ဆယ်ရက်လေါက်နေတော့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းခွင် ပြန်ဝင်နိုင်ပါပြီ။ အခုချိန်ထိလည်း ခါးပြန်မနာတော့ပါ။
သူတယောက်ထဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါ။ အလားတူ ဝေဒနာရှင် ဆယ့်နှစ်ယောက်တိတိကို ကျနော် ဒီနည်းနဲ့ ကယ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ မင်းတို့တပ်ထဲမှာ ပုံစံတူဝေဒနာသည် အဲ့သလောက်များသလားလို့မထင်ပါနဲ့။ တပ်ထဲက ၃ ယောက်ပါ။ အပြင်ကဝေဒနာသည် ၉ ယောက်ပါ။ ကျနော်ဒီနည်းသိပြီးတဲ့နောက်မှာ သွားရင်းလာယင်း ခါးစေါင်းနေတဲ့ ဝေဒနာသည်တွေ။ ခြေထော့နဲ့ထော့နဲ့ ဝေဒနာသည်တွေ။ တင်ပါးခွက်လေးပွတ်ပွတ်နေတဲ့ ဝေဒနာသည်တွေတွေ့ယင်ကျနော်က သိသိမသိသိ အတင်းလိုက်မိတ်ဖွဲ့ပါတယ်…
ဘယ်လိုဖြစ်ထာလဲ? ပေါင်တန်းနေတယ် မဟုတ်လား? ခြေထောက်ခြေဖျားတွေ ထုံကျင်နေတယ် မဟုတ်လား? တင်ပါးခွက်ကမခံစားနိုင်အောင် ကိုက်ခဲနေတယ် မဟုတ်လား? ခါးနာတာကစ တာမဟုတ်လား? ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးပီပီ ကူညီချင်တယ်- ကယ်တင်ချင်တယ်လေ။ ဇီဝိတဒါနပါ…………
ကဲ ဆေးနည်းလေး – စလိုက်ကြရအောင်……
အချိန်ဆယ်မိနစ်ဆိုရပါပြီ။ အိပ်ကာနီး အိပ်ရာမဝင်ခင်အချိန် ဆိုပါတော့…… မိမိရှေ့မှာ … ခါးလောက်ရှိတဲ့ တန်း(သို့)ခုံ (သို့) ပြူတင်းပေါက်ဘောင် တခုခုရှိပါစေ။ လူက နှစ်တောင်လောက်ခွာပြီး ခြေစုံရပ်ပါ။ဘယ် (သို့) ညာ ခြေတဖက်ကို ထိုတန်းပေါ ်သို့ လှမ်းတင်လိုက်ပါ။ ကျန်တဖက်ကရပ်လျက်ပေါ့။ ထိုသို့တင်လိုက်ပါက ထိုခြေထောက်၏ ပေါင်ကြောများ တောင့်တင်းနေပါလိမ့်မည်။ ၎င်းပေါင်ခြေသလုံးအောက်ဖက်ရှိ ကြွက်သားများကို မိမိလက်၂ဖက်နှင့် နှိပ်နယ်ချေပေးပါ။ ငါးမိနစ်ခန့်။ ပြီးလျှင်နောက်တဖက်ပြောင်း အလားတူ။
အရမ်းမချွံထက်သောအုန်းမှုတ်ခွက်(တခြမ်းစီ) အနေတော်ကို ကြမ်းပြင်မှာချထားပါ။ ဘယ်ညာ၂ဖက်စလုံးတက်ရပ်ပါ။ ပြီးလျှင် ဘယ်ညာဘယ်ညာစည်းချက်ကျကျ အချက်၁ဝဝခန့်နင်းပါ ။ နင်းသည့်အခါ ခြေဖဝါးအလယ်ခွက်မနင်းရပါ။ ခြေဖဝါးစေါင်းပတ်လည် ဘယ်စေါင်းညာစေါင်း ဖနောင့်ခြေဖျားလေးများစုံအောင်နှံ့အောင်ပူထူလာအောင် နင်းရမည်။ ပြုတ်မကျအောင်တန်းတခုခုကို ကိုင်ထားပါ။
ပြီးပါပြီ။ ဒါပါပဲ။ ထိုအချိန်မှစ၍တညလုံးခြေဖဝါး ရေမထိပါစေနှင့်။တညလုံးခြေဖဝါးကအပူတွေ တရှိတ်ရှိတ်ထွက်သလိုခံစားရပါလိမ့်မည်။ အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ တခုပဲ သတိပြုရမည်ရောဂါကြီးလျှင် ပထမဆုံးခါးအမြင့်လောက် ခြေထောက် ကို မြှောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ နိုင်သလောက်အမြင့်ပဲလုပ်ခိုင်းပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးမြှင့်သွားပါလေ။ အလွန်လွယ်ကူသောနည်းမို့ အထင်မသေးပါနှင့်။ ကျနော်နည်းပေး၍ ပျောက်ကင်းသွားသူ ၁၂ ဦးထဲတွင် ဂျာမန်မှ Odee Harlan ဆိုသော ဆရာဝန်တယောက် ပါဝင်ပါသည်။
အုန်းမှုတ်ခွက်နင်းရုံနဲ့ ဘာကြောင့် ပျောက်သလဲ? ကျနော့်ကို လာမမေးပါနှင့်။ ပထဝီ တေဇောအာပေါဝါယော ကျနော်မသိပါ။ ကျနော် ဗိန္နောဆရာမဟုတ်ပါ ။ အရိုးအကြောပညာရှင် Ortho/ physiotheraphy / Rehabilitation ကျနော်ဘာမှမသိပါ။ ကျနော်ဆရာဝန်လည်း
မဟုတ်ပါ။ ဆေးပညာလည်း နားမလည်ပါ။ သာမန်တပ်မတော်သား စစ်သားတဦးသာဖြစ်ပါသည်။ပျောက်ခဲ့ဖူးလို့ ပျောက်စေချင်လို့ အတွေ့အကြုံမျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်လျှင် လုပ်ကြည့်ပါ။
မနေ့က ဝေဒနာရှင်တဦးနှင့်တွေ့၍… အကြံပေးစကားပြောကြားရင်း ဒီအကြောင်းရေးဖို့ စိတ်ကူး ရလာတာပါ။ စေတနာရှေ့ထား သနားစာနာစိတ်ဖြင့် အပင်ပန်းခံစာအရှည်ကြီး ရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခဟောပြောခဲ့တဲ့ (၇) ဂဏန်း သမားတွေရဲ့ထူးခြားချက်များ အကြောင်း